Arsenal oo 20 sano ka dib ka hartay Horyaallada Yurub - BBC News Somali
Arsenal oo 20 sano ka dib ka hartay Horyaallada Yurub
Image caption Kooxda Arsenal ee uu hogaamiyo Arsene Wenger ayaa markii u horaysay u soo bixiwayday Horyaalka Yurub muddo 21 sano ah
Kooxda Arsenal ayaa ku guuldaraysatay in ay usoo baxdo koobka Horyaallada Yurub ka dib markii ugu horaysay muddo 20 sano ah, walow ciyaartii ugu dambeysay ee horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan ay shalay 3-1 uga adkaatay Everton.
Arsenal oo kulankaasi ka hor dhibic uun ka hoosaysay Liverpool oo kaalinta afaraad haysatay, ayaa u muuqatay mid booskaasi ciriirsan kartay, ka dib markii ay daqiiqadii 8-aad gool ka dhalisay Everton.
Balse Liverpool oo ay qasab ku ahayd in ay ka badiso Middlesbrough, ayaa goolka koobaad la timid waxyar ka hor dhammaadka qeybta hore ee ciyaarta, taasoo ay guusha ku raacday 3-0.
Liverpool ayaa markii ugu horaysay tan iyo xilli ciyaareedkii 2014-15 ka qeybgali doonta Horyaallada Yurub.
Arsene Wenger oo sheegay in garsooreyaasha loo ilaaliyo sida libaaxyada
Arsene Wenger oo ammaanay taageerayaashiisa
Tababaraha Arsenal, Arsene Wenger ayaa yiri "Waa wax laga caroodo, balse waxaa jirtay muddo xilli ciyaareedkan ka tirsan oo aad noogu adkeyd, si gaar ah aniga iigu adkeyd. Balse waxaan ku faraxsanahay in ciyaartooydeena ay karti muujiyeen.
Manchester City ayaa gashay kaalinta saddexaad, ka dib markii ay shalay 5-0 ku garaacday Watford.